बाढी, पहिरो र डुबानका कारण तरकारीको मुल्य आकासियो ( कुन तरकारीको कति भाउ बढ्यो ? ) | PBM News.com
चितवन ३० असार । केही दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण चितवन सहित देशका प्रमुख शहरहरुमा तरकारीको भाउ आकासिएको छ । बाढी पहिरोका कारण सडक यातायातमा असर पुगेपछि ढुवानीमा समस्या तथा भारी वर्षाले तरकारी खेतीमा पु¥र्याएको असरका कारण तरकारीको भाउ आकासिएको हो ।
भारतबाट आउने तरकारीमा पनि विषादी परीक्षणको विषयमा तनाव भएपछि स्थानीय तरकारी मात्र बजारमा आपूर्ति हुँदा भाउ बढेको नारायणगढ सब्जी मण्डीका व्यापारीहरु बताउँछन् । वर्षातपछि बजारमा पहिलेजति धेरै तरकारी आउन छाडेको उनीहरुको भनाई छ ।
कुन तरकारीको कति छ भाउ?
जन्मिएको एकवर्ष पछि वडा अध्यक्षले गराए बच्चाको न्वारन